डलरको मूल्य रेकर्ड उन्मुख, भारत फाइदामा हुँदा नेपाल किन घाटामा पर्‍यो? कारण यस्तो छ – Doink News!
लगातार रुपमा भारतीय रुपैयाँ कमजोर हुँदै गए पनि यस विषयमा आरबिआइ भने मौन देखिएको छ। उसले मुद्राको मूल्यको विषयमा कुनै कदम चाल्ने सङ्केत गरेको छैन। अझै केही दिन भारतीय रुपैयाँ कमजोर भएपनि उसले त्यसलाई सहज रूपमै लिने बताइएको छ।
भारतीय सञ्चार माध्यम दैनिक भास्करका अनुसार दैनिक रुपमा कमजोर हुँदै गएको भारतीय रुपैयाँले भारतलाई फाइदा पुर्याउदै लगेको छ। जसको कारणले पनि आरबिआइले मौनता साधेको उसको दाबी छ। बढ्दै गएको डलरको भाउले निर्यातमा फाइदा पुर्याउदै गएको छ। सस्तो मूल्यमा उत्पादन गरेको बस्तुको निर्यातमा बढी रकम मुलुक भित्रिने अवस्था सिर्जना भएको छ। यसै पनि सरकारले उत्पादनकर्ताहरूलाई सहुलियत दिँदै आएको छ। त्यसमा पनि निर्यात मार्फत बढी रकम मुलुक भित्रिँदै गएको अवस्थाले गर्दा आरबिआइ बढ्दो डलरको मूल्यमा मौन बसेको उसले आफ्नो अनलाइन संस्करणमा लेखेको छ।
अझै केही पैसा घट्दासम्म आरबिआइले कुनै कदम उठाउने छैन। गत बुधवार २० महिना यताकै क्षयीकरण भारतीय मुद्रामा देखियो। प्रति एक डलरको भारतीय रुपैयाँ ७६ रुपैयाँ २८ पैसासम्म उक्लियो। यसअघि सन् २०२० अप्रिलमा उक्त मूल्यमा भारतीय रुपैयाँ झरेको थियो। आरबिआइले ७७ रुपैयाँसम्म ओर्लँदासम्म कुनै कदम नचाल्ने सङ्केत गरेको छ। तर उक्त मूल्य भन्दा पनि तल भारतीय रुपैयाँ झरेमा भने आरबिआइले नयाँ कदम चाल्न सक्छ।
उता आरबिआइले अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बैंकले आगामी दिनमा चाल्न सक्ने कदमलाई पनि प्रतीक्षा गरिरहेको छ। यदि अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बैंकले ऋण पत्रको खरिद बढाएमा भारतीय रुपैयाँ थप कमजोर हुने छ। त्यसपछि उसले कस्तो कदम चाल्ने भन्ने योजना बनाउन सक्छ। त्यसले गर्दा पनि आरबिआइ यति बेला बढ्दो डलरको मूल्यलाई लिएर मौन रहेको भास्करले उल्लेख गरेको छ।
उता आरबिआइ अमेरिकी फेडरल रिजर्भ बैंकले चाल्ने कदमको पर्खाइमा रहँदा नेपालको केन्द्रीय बैंक भने सोही विषयमा योजना विहीन छ। उसले बुधवार चौमासिक विवरण सार्वजनिक गर्दै असाध्यै जटिल अवस्थामा अर्थतन्त्र रहेको बताएको छ। दिन दिन बढ्दै गइरहेको डलरको मूल्यले आगामी दिनमा नेपालको अर्थतन्त्रमा थप चाप पर्ने निश्चित जस्तै देखिएको छ। किनकि भारतले बढेको डलरको विषयलाई लिएर कुनै कदम नचाले त्यसको चेपुवामा नेपाल पर्दै जाने छ। नेपाल चेपुवामा पर्दा भने त्यही बढेको डलरले भारलको अर्थतन्त्रमा थोरै सकारात्मक प्रभाव पर्दै जाने छ। जसले गर्दा पनि उसले तत्कालै कुनै कदम चाल्ने देखिँदैन। उसले तत्कालै कुनै कदम नचाले नेपाल थप चेपुवामा पर्ने निश्चित देखिएको हो। किनकि नेपालको रुपैयाँ भारतीय मुद्रासँग स्थिर छ। जबसम्म भारतीय रुपैयाँ बलियो हुँदैन। तबसम्म नेपाली रुपैयाँ मजबुत हुँदैन।
लगातार बढ्दै गएको डलरको मूल्यले दैनिक रुपमा समग्र नेपाली अर्थतन्त्रमा दबाब बढाउँदै लगेको छ। भदौदेखि बढ्दै गएको डलरको मूल्यले खासगरि नेपालको शोधनान्तर बचतमा दबाब बढाउँदै लगेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार प्रकाशित गरेको विवरण अनुसार चालु आर्थिक वर्षको पहिलो चार महिनामा शोधनान्तर घाटा बढेर १५० अर्ब ३८ करोड रुपैयाँ पुगेको छ। जबकि असोज मसान्तसम्म ७५ अर्ब १४ करोड रुपैयाँ मात्र थियो। चौथो महिनामा ह्वात्तै घाटा बढेर डेढ खर्बभन्दा माथि उक्लनुमा बढ्दै गएको डलरको मूल्यले पनि पर्याप्त भूमिका खेलेको छ। किनकि नेपालको अर्थतन्त्र आयातमा निर्भर रहेकोले पनि डलरको मूल्य बढ्दा घाटा थप चुलिएको हो। गएको चार महिनामा नेपालले आयात मार्फत ६ सय ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ खर्चिदा निर्यात मार्फत जम्मा ८२ अर्ब १२ करोड मात्रै आर्जन गरेको छ।
निर्यात पनि त्यही दाँजोमा हुन सकेको भए डलरको मूल्य बढ्दा नेपाललाई खासै असर पर्ने थिएन। निर्यात मार्फत आउने रकम कम हुने तर आयात मार्फत जाने रकम बढी हुँदा बढेको डलरको मूल्यको प्रभाव सोझै देखिएको हो। उता भारतमा भने निर्यातको कारण बढेको डलरको मूल्यले पनि खासै ठूलो प्रभाव पारेको छैन। बरु एक हदसम्म राम्रै नतिजा निकालिरहेको छ। नेपाल भने आयतकै कारण थलिँदै गएको छ।
अर्को तर्फ बढेको डलरको मूल्यले नेपाललाई विप्रेषण प्रवाहमा फाइदा गर्छ। तर जसरी विप्रेषण आएको त्यसले मात्रै आयात धान्ने स्थिति कम हुँदै गएको छ। गएको चार महिनामा विप्रेषण मार्फत ३१२ अर्ब ४२ करोड रुपैयाँ नेपाल आउँदा आयात मार्फत ६ सय ५० अर्ब २९ करोड रुपैयाँ बाहिरिएको छ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले बिहीबारका लागि प्रकाशित गरेको अन्तर्राष्ट्रिय विनिमय दर अनुसार बिहीबार एक अमेरिकी डलरको बिक्री मूल्य १२२ रुपैयाँ २८ पैसा पुगेको छ। डलरले भेट्टाएको उक्त मूल्य पुनः एक पटक रेकर्ड उन्मुख देखिएको छ। यसअघि डलरको मूल्य १२३ रुपैयाँ २८ पैसासम्म पुगेको थियो। डलरले २०७७ वैशाख ५ गते अहिलेसम्मकै सर्वाधिक मूल्य भेटाएको हो। उक्त मूल्य १७ महिना २६ दिन अघि पुगेको हो। त्यस यता भने डलरको मूल्य गत भदौसम्म घट्दो अवस्थामा थियो। उचाइमा पुगेपछि २०७८ भदौ १७ गते डलरको मूल्य ११७ रुपैयाँ २ पैसासम्म झरेको थियो।
Categorized as ML Tagged उनमख, कन, करण, घटम, छ, डलरक, नपल, परय, फइदम, भरत, मलय, यसत, रकरड, हद
NEPSE drops 37.87 points on Thursday – Nepal Press